ဘိုင်ပင် - ဝီကီပီးဒီးယား
In the Ta Prohm temple ruins in Cambodia
မျိုးသုဉ်းမှုအန္တရာယ်နည်းပါး (IUCN 2.3)
သစ်ပုပ်ပင် ဟူ၍လည်းကောင်း၊ စောဖျပင်ဟူ၍လည်းကောင်း ခေါ်သော ဘိုင်ပင်သည် ဒက်တစ်ကေ စီအီး မျိုးရင်းတွင် ပါဝင်၍ ယင်းကို ရုက္ခေဒေအလိုအားဖြင့် တက်တြာမီလီ နျူဒီဖလိုရာ (Tetrameles nudiflora) ဟုခေါ်သည်။ အထက်နှင့် အောက်မြန်မာနိုင်ငံ ချိုင့်ဝှမ်းဒေသများ၌ ပေါများ၍ တစ်ခါတစ်ရံ အစုလိုက်ပေါက်တတ်သော တောသစ်ပင်ကြီးမျိုး ဖြစ်သည်။ ဘိုင်ပင်တို့သည် များသောအားဖြင့် အမြင့်ပေ ၁ဝဝ ကျော်ရှိ၍ မြန်မာနိုင်ငံ သစ်ပင်တို့တွင် ပင်စည် အရင်း၌ ကျားကန်မြစ်များ အထူးအတုတ်ဆုံး အပင်များ ဖြစ်ကြသည်ဟု ယူဆရသည်။
ဘိုင်ပင်၏ အသားမှာ မွဲပြာရောင်ဖြစ်၍ ပျော့လည်းပျော့၊ ပေါ့လည်းပေါ့သည်။ သို့သော် ကြာရှည်ခံသော သစ်မျိုးမဟုတ်ပေ။ ခွဲဖြတ် စိတ်ဖြာပြီးနောက် အမြန်ခြောက်သွေ့အောင် မပြုလုပ်နိုင်ပါက သစ်သား၏ အရောင်အဆင်း ပျက်ပြားသွားတတ်သည်။
သို့ရာတွင် ဘိုင်ပင်၏ အသားသည် ထင်းရှူးသေတ္တာကဲ့သို့ပစ္စည်းထည့်ရန် ပေါ့ပါးသော သေတ္တာများ ပြုလုပ်ရာ၌ အသုံးကျသော သစ်သားဖြစ်ရာ၊ အိန္ဒိယ နိုင်ငံတွင် ထိုသေတ္တာမျိုးကို ဘိုင်သားဖြင့် အများအပြား ပြုလုပ်လေ့ရှိကြသည်။
မီးခြစ်သေတ္တာမျိုးကို ဘိုင်သားဖြင့် အများအပြား ပြုလုပ်လေ့ရှိကြသည်။ မီးခြစ်သေတ္တာအိမ် များကိုလည်း ထိုသစ်သားဖြင့် ပြုလုပ်နိုင်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဘိုင်သားကို လှေများ စပ်ခြင်း၊ ပုဂံနယ်တွင် ကျောက်ကာသေတ္တာပြုလုပ်ခြင်း စသည်တို့၌ အသုံးပြုကြသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ ပင်လယ်ကမ်းရိုးတန်း ဒေသများ၌ ဘိုင်တောင်ရှည်ခေါ် ချုံပင်များ ပေါက်ရောက်သည်။ တနင်္သာရီတိုင်း တောင်ဘက်ပိုင်းရှိ ပင်လယ် ကမ်းတစ်လျှောက်တွင် ကဘိုင်ပင်၊ ဘိုင်တောင်ပင်၊ ကမြိုင်ပင်ဟူ၍ အမည် ၃ မျိုးဖြင့်ခေါ်သော သစ်ပင်တို့ကို တွေ့မြင်နိုင်သေးသည်။
ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်နယ်မြေတွင်ရှိသော Tetrameles nudiflora သစ်ပုပ်ပင်
↑ World Conservation Monitoring Centre (1998). Tetrameles nudiflora. 2006 IUCN Red List of Threatened Species. Downloaded on 23 August 2007.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဘိုင်ပင်&oldid=714257" မှ ရယူရန်
တရုတ်နိုင်ငံတွင် တွေ့ရှိရသော သစ်ပင်များ
ဩစတြေးလျနိုင်ငံတွင် တွေ့ရှိရသော သစ်ပင်များ
ဤစာမျက်နှာကို ၂ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၀၈:၄၃ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။